 » Izindaba
Uhlu lwepharamitha lobuchwepheshe lomshini wokumboza we-multilayer optical
Esinemthombo Igumbi usayizi
Ф1050 × 1250, 304 insimbi engagqwali.
Usayizi wangaphakathi wokumboza umgodi
Ubakaki wokulungisa ungama-1680mm ngenhla komhlaba, efanelekile ukuphakama kokusebenza kwe-ergonomic.
Ubakaki wokulungisa ungama-1468mm ngenhla komhlaba, efanelekile ukuphakama kokusebenza kwe-ergonomic.
Ubakaki wokulungisa ungama-1510mm ngenhla komhlaba, efanelekile ukuphakama kokusebenza kwe-ergonomic.
1.Arched single-workpiece disc, ukuhlangabezana namakhasimende’ Izidingo zokufana ngezinga elikhulu.Rotot 5-30r / min, ushintsho lwejubane olungenazinyathelo.
2.I-arched disc-workpiece disc, izinguquko zeplanethi nokuzungezisa, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ngomthamo wokukhiqiza ngezinga elikhulu kakhulu.Rotation 5-30r / min, ushintsho lwejubane olungenazinyathelo.
Kutholakala ngezingcezu ezine, engela ubakaki kuyinto adjustable, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ngokufana ngezinga elikhulu.Rotation 5-30r / min, ushintsho lwejubane olungenazinyathelo.
Arched single-workpiece disc, ukuhlangabezana namakhasimende’ Izidingo zokufana ngezinga elikhulu.Rotot 5-30r / min, ushintsho lwejubane olungenazinyathelo.
Iyunithi: futha lokusabalalisa iDIP-12000 (Leybold), Impande impompo ZJY-300, imishini yokumpompa 2X-70, ipompo yesondlo 2X-8 304 insimbi engagqwali.
Iyunithi: Iphampu yokusabalalisa KT-400 (UZhenhua), Impande impompo ZJY-150, imishini yokumpompa 2X-70, ipompo yesondlo 2X-8.
Iyunithi: futha diffusion KT-600 (UZhenhua), Impande impompo ZJY-600, imishini yokumpompa 2X-70, ipompo yesondlo 2X-8.
Iyunithi: Impompo diffusion KT-800 (UZhenhua), Impande impompo ZJY-600, imishini yokumpompa 2X-70, ipompo yesondlo 2X-8.
Umshini wokugcina: kangcono kune-4 × 10-4 Pa.
Ifakwe ngedivayisi yokulwa nesiyaluyalu, ukuklanywa kokuvikeleka kokuphepha, ngesandla futhi okuzenzakalelayo ozikhethela.
Heating indlela on Ukushisa tube, Ukulawulwa kwe-PID, umkhawulo ongu-350 ℃ ± 1.5 ℃.
Ukusebenza kwamandla emali
Insimbi yokulawula ukugeleza kwegesi noma ukulungiswa okuhle kwamandla kwe-inflation valve.
Umshini ionization bombardment
DC 3KV, 06KW induku cathode (isetshenziselwa ukuhlanza umsebenzi ngaphambi kokumboza).
Umthombo wokuhwamuka (ongakukhetha)
1. I-TELEMARK-270 ° isibhamu se-electron (ingenisiwe), 6KW, i-voltage ephezulu ye-4KV-10KV eguquguqukayo, ukuskena kwe-triangle wave, ukuskena okuyindilinga, ukuvunguza ukuskena.Indawo enhle yesigxobo egxile, high ukuma ngokunemba, nokukhiqiza kabusha okuhle kokuthwebula.
2. Isibhamu se-electron yasekhaya (UZhenhua): 6KW, i-voltage ephezulu ye-4KV, 8KV eguquguqukayo, Ungakhetha unxantathu wave, sine wave, isikwele wave ukuskena ngokukhululekile.
3. I-Crucible: Izintambo eziyisithupha Φ38 × 20 i-crucible noma umgodi omane Φ38 × 20 kanye ne-one-cavity crucible emise i-arc ngobude be-arc ephakathi 87 (isetshenziselwa ukusetshenziswa kakhulu kwezinto eziphansi zokuncibilika kokuhwamuka) noma umgodi omane Φ48 × 18 i-crucible.
Umthombo we-Ion (ongakukhetha)
1. I-RF (Imvamisa Yomsakazo) Umthombo we-Ion (Kungenisiwe).
2. 5Umthombo we-KVA Hall ion (kukhiqizwa nguZhenhua), isetshenziselwa ukuhlanza ngaphambi kokufakwa kwe-electroplating noma okusizayo enqubeni ye-electroplating, okuzuzisa ukuthuthukisa inkomba yokubonisa yefilimu, ukuqina, ubukhulu nokunamathela kwefilimu.
Uhlelo lokulawula ubukhulu beFilimu (Ukukhetha)
1. Isilawuli se-crystal-MDC-360 (ingenisiwe) ingagcina izendlalelo eziyi-1 ～ 99 zenqubo yokumboza okuzenzakalelayo, 99 izinhlobo zedatha yohlelo, ukunemba 0.5%+1? Iphutha elilungisiwe. 2TELEMARK-880 isilawuli se-crystal (ukungenisa): ingagcina izendlalelo eziyi-1 ～ 99 zenqubo yokumboza okuzenzakalelayo, 99 izinhlobo zedatha yohlelo. 精度 0.5% + 1? Iphutha elilungisiwe.
3. Isilawuli se-TELEMARK-820 (ukungenisa): yamukela ubuchwepheshe bokuhlaziya okuphelele be-spectrum ephelele, futhi ahlulele ukuphela kwefilimu ngokuhlaziya ukudluliswa (noma ukucabanga) ijika leshidi lokuqapha 370-870 Ukunemba kokulawula okuphezulu, ukulawula kwe-wavelength okukodwa, isilawuli esizenzakalelayo nokulawulwa kwemanuwali nakho kungasetshenziswa.I-software eyengeziwe ye-MACILEOD yefilimu yokubala, izinga eliphezulu lokuhlanganiswa.
4. I-TELEMARK-820 isilawuli se-optical nesilawuli se-TELEMARK-880 se-crystal singahlangabezana nezidingo zokunemba okuphezulu nokuphindaphinda okuphezulu..
5. Isilawuli se-Domestic optical (njenge 9704 i-monochromator efanayo, njll.), i-wavelength iyashintshwa kusuka ku- 330 uku 870, nokunemba kungafinyelela ku-± 1.5nm.
Ngesisekelo sikazibuthe, ingabekwa kunoma yisiphi isikhundla somnyango wegumbi lokungena kanye nekhabethe yokulawula.
Okwedlule: Ukuhlaziywa kwenkinga yokufaka ushevu nokumnyama kwengxenye eqondiwe ngemuva kokuphimisa
Olandelayo: Ungayihlukanisa kanjani ubuchwepheshe be-magnetron sputtering？